Ilay cinematographer nahazo loka loka Josh Ausley dia niherika ny taona famokarana nandritra ny areti-mandringana | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Ilay cinematographer nahazo loka loka Josh Ausley dia niherika ny taonan'ny famokarana nandritra ny areti-mandringana
DP Josh Ausley dia nampiasa ny Cartoni Focus 12 tamin'ilay andiana fitifirana Budweiser
Ilay cinematographer nahazo loka loka Josh Ausley dia niherika ny taonan'ny famokarana nandritra ny areti-mandringana
Ny fakan-tsarin'i Josh Ausley dia natsangana tamin'ny fampiasana tripods Cartoni
Ilay cinematographer dia manazava ny antony nahatonga ny ekipazy kelikely sy mailamailaka kokoa nitondra ny taona, nanome ny faminaniany momba ny ho avy, ary mizara ny zavatra niainany tamin'ny tripods Cartoni
Tamin'ny martsa lasa teo, ny Los Angeles faritra, iray amin'ireo vatosoa manjelanjelatra an'ny Hollywood empira fialamboly, nanatevin-daharana ny sisa tamin'izao tontolo izao rehefa nanery ny olona rehetra tao amin'ny faritra hipetraka ao an-trano ny areti-mandringana. Ny filaminan'ny trano sy ny fanakatonana indostrialy manaraka dia nandefa ny tontolon'ny famokarana manontolo ho lasa rambony, miaraka amin'ny Los Angeles faritra tombanana ho very asa iray tapitrisa eo ho eo. Nalefa nody ireo ekipa mpanao sarimihetsika, ary mpiatrika sinematographer tsy miankina maro no niatrika ho avy tsy azo antoka.
Nahita an'i Joshua Ausley, cinematographer, mpandresy nahazo loka iraisam-pirenena isika, izay mampisaraka ny fotoanany Los Angeles ary i Atlanta, mba hahalalany ny eritreriny tamin'ny taona lasa. I Ausley dia niasa tamina horonantsary sy tetikasa asongadin'i Marvel, HBO, ary Netflix, ankoatry ny hafa. Miverina mijery ny taona izy, ny eritreriny momba ny ho avy, ary mizara ny zavatra niainany tamin'ny fampiasana tripods Cartoni.
Ny famokarana horonantsary sy horonan-tsary dia mihemotra indray aorian'ny COVID ary mijanona ao amin'ny baiko an-trano, saingy somary sahirana ianao. Azonao atao ve ny milaza amiko momba ny sasany amin'ireo tetik'asa niasanao?
Notifiriko ny dokambarotra iray ho an'ny XFINITY, narahiko fisehoan-javatra fanadihadiana izay nahitana fotoana be dia be teny an-dalana. Saika lavitra ny mpanjifa ny zava-drehetra, midika izany fa ny masoivoho sy ny mpamokatra mijanona ao an-trano any LA na UK (na aiza na aiza misy azy ireo) ary mijery na mitarika ny fitifirana amin'ny alàlan'ny serivisy streaming.
Ny Diversification no lakile hitohizan'ny fandehan'ny asa. Rehefa ritra ny asa ara-barotra mahazatra dia afaka nifindra haingana izahay ary nanomboka nanao tifitra lavitra, toy ny fanadihadiana tamin'ny fahitalavitra, mba hanampiana anay mandra-piverin'ny raharaha.
Jereo ny toerana XFINITY notifirin'i Josh Ausley nandritra ny areti-mandringana:
Comcast / Xfinity - Milalao Harderer avy amin'ny Imperium Productions on Vimeo.
Iray amin'ireo tifitra areti-mandringana voalohany nataonao ny dokambarotra Budweiser Memorial Day "Makà roa minitra". Tahaka ny ahoana ny niasa tamin'io varotra io tamin'ny tampon'ny areti-mandringana?
Nanatona anay ny maso ivoho, DAVID, mba hiditra amin'ny fampielezan-kevitra an-tanàn-dehibe hanomezam-boninahitra ireo veterana sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ho an'ny toerana fahatsiarovana nataon'i Budweiser. Ireo faritra isan-karazany dia tokony nila ekipa isan-karazany satria ferana ny dia. Na izany aza, rehefa niova ny fizotran'ny famoronana, dia nanana ny fahafahana namokatra ny faritra iray manontolo izahay. Nitondra mpamokatra efa za-draharaha aho, Liz Stovall an'ny Fenton Pictures, hanampy ahy hanao ny varotra mba hahafahako mifantoka amin'ny fitantanana ny sary. Ny toerana dia mitantara ny momba ny mpikambana ao amin'ny tafika sy ny mpitsabo iray, nampifangaro azy ireo tamin'ny alàlan'ny fitifirana sary mitandahatra izay naseho tamin'ny fomba fisarahana.
Tsy ampy herinandro akory izahay nanambarana azy, izay nahitana talenta sy toerana ahazoana loharano. Notazonina ho kely foana ny zava-drehetra noho ny Covid tamin'ny fangatahan'ny maso ivoho, dia nanangona ekipa mahia tsy latsaky ny folo izahay ary nitifitra ny zava-drehetra tao anatin'ny iray andro. Tsy nisy herinandro intsony io toerana io!
Zahao ny tifitra Budweiser Josh Ausley voatifitra nandritra ny areti-mandringana, tamin'ny fampiasana ny Cartoni Camera Support:
Azonao atao ve ny manazava ny tsy itovizan'ny traikefa io amin'ny famokarana mahazatra?
Marina io fitifirana io satria nihombo ny areti-mandringana teto Etazonia. Tamin'izany fotoana izany dia betsaka ny zavatra tsy fantatra ary tsy misy fanekena eken'ny besinimaro, noho izany dia tsy maintsy nanao izay rehetra azonay natao izahay [mba hijanonana ho azo antoka]. Ny ekipazy rehetra dia nanao PPE ary nijanona enina metatra isaky ny mandeha. Ny maraina ny fizahana ny mari-pana. Nentina tany ivelany ny sakafo atoandro ary nosarahina tamin'ny zavatra nasiana boaty tsirairay.
Somary talohan'ny naha-fenitra ny fanehoan-kevitra momba ny Zoom. Vokatr'izany dia nandefa sary sy pikantsary niverina tany amin'ny mpanjifa izahay mba hahazoana ny hevitr'izy ireo sy ny fankatoavany. Ary mbola tsy maintsy niasa haingana izahay!
Azonao atao ve ny miresaka momba ny fitaovana nampiasanao tamin'ny fitifirana?
Notifirinay ny Arri Alexa Mini-ko, niaraka tamin'i Zeiss mk3 Super Speeds. Ho fanohanana dia nampiasa ny Tripod 22 Cartoni tripod sy EasyRig aho ho an'ny tifitra tànana. Tsy maintsy nisintona ny fifantohako aho satria tsy nanana AC voalohany ho an'ny fitifirana.
Satria kely dia kely ny ekipazy dia nampiasa fonosana jiro mahia izy ireo, izay ahitana ny Joker HMI 800-watt, ny tontonana Litepanels Gemini, ary ny tarika Kino Flo Select 30 LEDs iray.
Miaraka amin'ny ekipazy kely kokoa, inona no maha-zava-dehibe ny fananana loha kely madio sy maivana ary azo ianteherana toy ny Cartoni anao?
Ny ekipazy kelikely kokoa dia midika hoe vitsy ny tanana manampy amin'ny famindrana fitaovana. Manao satroka marobe ny olona izao, ary arakaraky ny maha mavesatra ny fitaovana no miadana kokoa ny fivezivezenao. Ny fananana loha tripod maivana dia nanampy ahy fatratra satria tsy nanana AC ho an'ny fitifirana aho. Afaka naka ny tapa-kazo sy ny fakantsary indray mandeha aho mba hifindra eo anelanelan'ny fanamboarana ary hanao fanitsiana kely amin'ny toeran'ny fakantsary raha ilaina izany.
Efa niasa tamin'ny tifitra hafa ve ianao nandritra ny areti-mandringana (tany Mexico vao haingana ianao nitifitra koa, sa tsy izany?)
Vao avy niverina avy tamin'ny fakana sary an-tsarimihetsika Cancun aho ho an'ny resort marolafy iraisana rehetra hanehoana ny fomba fiarovana COVID sy handresen-dahatra ny olona hiverina. Ny indostrian'ny fitsangatsanganana angamba no tena voa mafy indrindra mandritra io areti-mandringana io, satria fantatry ny vadiko tsara satria matihanina amin'ny dia izy. Saingy mbola misy toerana sasany azon'ny Amerikanina aleha. Ho an'ity fitifirana ity dia nentiko ny Sony FX9 miaraka amin'ny Focus HD Cartoni tripod system, fonosana maivana kokoa izay nahatonga ahy ho lasa finday lehibe. Ny ifantohana HD dia ny halehiben'ny tonga lafatra, ary ny lanjany ampiasaina amin'ny FX9 ary mahatonga ny fitifirana mahia ho mora kokoa kokoa.
Ahoana araka ny eritreritrao no hanova ny famokarana ny valanaretina?
Ao anatin'ny fotoana fohy, mazava fa hitondra PPE isika, hahazo mari-pahaizana momba ny mari-pana, ary fizahana matetika amin'ny seho lava kokoa. Ny famokarana sasany dia mametraka ny ekipa ho quarantine alohan'ny hanombohana, indrindra any amin'ny firenena hafa. Goavana izao ny famokarana lavitra, miaraka amin'ireo mpanjifa miditra ao anaty fitifirana avy any an-tranony na any amin'ny biraony.
Heveriko fa hahita fiovana maharitra eto isika, na dia efa lasa aza ny areti-mandringana. Tahaka ny orinasa maro ankehitriny dia manana fomba fijery tsara kokoa momba ny fiasana an-trano, mieritreritra aho fa hahatsapa bebe kokoa ny mpanjifa fa tsy mila manidina amina olona marobe ho an'ny famokarana izy ireo. Ny tifitra lavitra dia mety ho malaza foana, mba hitsimbinana ny vokatra amin'ny ora, ny mpiasa ary ny saran-dia. Ny maharatsy an'io dia maharitra ela kokoa ny fahazoana ny hevitry ny mpanjifa sy ny fankatoavana azy, ka io no vokany.
Tena mila miovaova isika amin'ny 2021.
Mandra-pahoviana ianao no nampiasa Cartoni?
Nividy ny tripod Cartoni voalohany nataoko tamin'ny 2016 tamin'ny alàlan'ny programa fifanakalozana mpivarotra hafa. Tsikaritro avy hatrany fa fanavaozana lehibe ho ahy izany. Nanandrana rafitra maro isan-karazany aho, saingy nahatratra ny teboka rehetra ny fonosana Cartoni nefa tsy nandefitra na inona na inona. Rafitra matanjaka sy maharitra izay mahazaka kapoka sy loha mahamay afaka mampifanaraka ny lanjan'ny fakantsary maro samihafa. Nitifitra endri-javatra efatra niaraka taminy aho ary niara-dia taminy matetika. Tena mitazona tsara izy io.
Lohan-drano iza no fanananao?
Manana ny loha Focus 22 aho ary koa ny Focus HD. Mahafinaritra ny sady manana fonosana maivana be ary mahazaka enta-mavesatra lehibe. Izy roa ireo dia mahazaka izay rehetra hatsipy amin'izy ireo!
Manios Digital no mpaninjara manokana ny fitaovana famokarana premium ao anatin'izany ny Cartoni Camera Support, jiro Kinotehnik, ary bateria sy kojakoja Hawk-Woods.
Ny Bright Co
Lahatsoratra farany nataon'ny The Bright Co (jereo rehetra)
Ny oniversite fikarohana eropeana malaza dia lasa faharoa nanamarina fa ny UV-C Boxer dia mamono otrikaina famokarana avy any Covid-19 ao anatin'ny 3 minitra fotsiny - Aprily 19, 2021
Ilay cinematographer nahazo loka loka Josh Ausley dia niherika ny taonan'ny famokarana nandritra ny areti-mandringana - Aprily 6, 2021
Ny Lab any Texas dia manamarina ny fahafahan'ny CARTONI UV-C BOXER hanafoana ny COVID-19 ao anatin'ny 3 minitra fotsiny - Janoary 18, 2021
manohana fakan-tsary cartoni cartoni tripods Fiarovana COVID COVID fiarovana amin'ny seta manios digital Vokatra vaovao User Stories Video Production 2021-04-06
Previous: VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers'
Next: Grass Valley dia manatsara ny fanitarana ny GV Media Universe miaraka amin'ny fanendrena an'i Barbara DeHart